ဂျပန်မိခင်များ ကလေးများကို ဘာကြောင့် တွန်းလှည်းများမသုံးဘဲ ကိုယ်တိုင်ချီကြတာလဲ?? - ONE DAILY MEDIA
ဂျပန်တွင် မိခင်များက ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များကို ကျောပေါ်တွင် တင်ဆောင်သည်ကို မြင်တွေ့ရ လေ့ရှိပါတယ် ။ တကယ်တော့ ဂျပန် အမျိုးသမီး ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်က ကလေးငယ်တွေကို ကျောပေါ်မှာ ချီပိုးပြီး လက်နဲ့ နောက်ပြန် ကိုင်ဆောင်ထားလေ့ရှိတာကို သင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် ကယ်ရီယာတစ်ခုတွင် ကလေးကို ကျောပိုးထားသည်ကို သင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကို အံ့အားသင့်စေသည့် ဤဂျပန်မိခင်များ၏ အပြုအမူနောက်ကွယ်ရှိ အကြောင်းရင်းများကို လေ့လာခဲ့ ပြီးတော့ ၎င်းတို့ကို သ င်နှင့်မျှဝေလိုပါတယ်
(၁) ကလေးများကို ကိုယ်တိုင်ချီပိုးခြင်းဟာ ရှေးရိုးစွဲဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
ကလေးငယ်များကို “နောက်ပြန်ချီပိုးသည့်သိုင်းကြိုး” ဟုဘာသာပြန်ဆိုထားသည့် “Onbuhimos” ကို အသုံးပြု၍ သယ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဤကလေးသယ်ပိုးသည့်ကြိုးကို ပျော့ပျောင်းသောအထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ကလေးများကို ကျောပေါ်တင်ကာ ၎င်းတို့၏ပခုံးပေါ်မှ နေ၍ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်ရှုခွင့်ပေးသည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဟိုးယခင်အခါက မိခင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကလေးငယ်များကို စပါးစိုက်ခင်းများသို့ ခေါ်ဆောင်သွားရပြီး လယ်အလုပ် အလုပ်လုပ်နေစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ သားသမီးများကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရန် အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) မိခင်နှင့်ကလေးကြားမှ အရေးပါသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှု
မိခင်နှင့်ကလေးဆက်ဆံရေး သာမန်အားဖြင့် နက်ရှိုင်းသော်လည်း ဂျပန်မိခင်များနှင့် ၎င်းတို့၏ကလေးငယ်များကြား တွယ်တာမှုက အလွန်ခိုင်မာသည်ဟု ဆိုထားကြပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိတ်ဆက်မှုကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြပါတယ် ။ သူတို့သည် ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့် အတူ လှုပ်ရှားမှုများကို မျှဝေကြပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရင်းနှီးရန် အခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံကြပါဘူး။
(၃) မိဘရဲ့ချီပိုးခံရတဲ့ကလေးဟာ ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပြီး စိတ်နှလုံးတည်ငြိမ်ပါတယ်
ကျန်းမာသော ကလေးငယ် ၁၂ ဦးကို ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ မိခင်များက ချီပိုးလာသော ကလေးငယ်များသည် နှလုံးခုန်နှုန်း တည်ငြိမ်ကာ သက်တောင့်သက်သာရှိရကြောင်း သိရပါတယ်။ လမ်းလျှောက်မိခင်မှ ချီပိုးလာသော ကလေးငယ်များသည် မိခင်၏အသက်အရွယ် သို့မဟုတ် လမ်းလျှောက်နှုန်းကို မခွဲခြားဘဲ တွန်းလှည်းဖြင့်ထိုင်လျှက် သယ်ဆောင်ခံရသည့် ကလေးငယ်များထက် ပို၍ စိတ်အေးလက်အေးနှင့် အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြောင်း လေ့လာမှုများက ပြသခဲ့ပါတယ်။
(၄) အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လမ်းကြောင်းများပေါ်တွင် ကလေးကို ကိုယ်တိုင်ချီပိုးထားခြင်းကပိုမို လက်တွေ့ကျပါတယ်
ဂျပန်လူမျိုးများဟာ အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို အသုံးပြုသောကြောင့်၊ တိုကျိုမြို့တစ်ဝိုက် သို့မဟုတ် အခြားမြို့များကို ဘတ်စ်ကား၊ မြေအောက်ရထား သို့မဟုတ် မီးရထားဖြင့် သွားလာလိုသော မိခင်များကအဆင်ပြေမည့်ဖြေရှင်းနည်းကို ရှာဖွေကြပါတယ်။ တွန်းလှည်းအစား ကလေးများကို ကယ်ရီယာ သို့မဟုတ် ထုပ်ပိုးဖြင့် သယ်ဆောင်လိုကြပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နေရာများတွင် အတက်အဆင်းပြုလုပ်ခြင်းအတွက် လမ်းပိတ်ဆို့မိမည်ကို မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။
(၅) ဂျပန်တွင် ရွေးချယ်စရာ ကလေးချီပိုးအိတ်များ အများအပြားရှိပါတယ်
Onbuhimo ဟာ ဂျပန်ရိုးရာကလေးကယ်ရီယာဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဒီဇိုင်းများသည် ယခုအခါ ပိုမို ခေတ်မှီ အဆင့်မြင့်လာပါတယ် ။ ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော အထည်များနှင့် ပိုမိုဆန်းသစ်သော ကလေးသယ်ပိုးအိတ်များကို ဂျပန်စျေးကွက်တွင် ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။
တွန်းလှည်းကို မသုံးပဲ ကလေးကို ကိုယ်တိုင် ချီပိုးပြီး သယ်သွားရတာကို သင် ဘယ်လိုခံစားရလဲ။ စမ်းကြည့်ဖူးပါလား ??